မြန်မာပြည်က Developer တွေအတွက် Bank Withdraw Method သိချင်လို့ ပါ - MYSTERY ZILLION
မြန်မာပြည်က Developer တွေအတွက် Bank Withdraw Method သိချင်လို့ ပါ
လက်ရှိ Online က Payment တော်တော်များများမှာ ( Google Adsense ရဲ့Payout အပါအ၀င် ) Wire Transfer ဆိုတာ ပါတာတွေ့ ရပါတယ် ။ သူ့ ရဲ့Info ထဲမှာဖြည့်ရတာတွေက Bank Name , Location , SWIFT code, User Account Number အစရှိသဖြင့်ပါ။
ပြီးတော့ CB bank ရဲ့International Fund Transfer ( http://www.cbbank.com.mm/personal_banking/personal_funds_internationalviaSWIFT.aspx ) ဆိုတာလေးကို ကျွန်တော် သွားတွေ့ တယ် ။
ဒီ Service ကို သုံးပြီး Withdraw လုပ်လို့ ရပါသလား ?
ပြီးတော့ အခုနောက်ပိုင်း CB , KBZ , Ayer အပါအ၀င် ဘဏ်တော်တော်များများမှာ Foreign Currency Account ဆိုတာ ဖွင့်လို့ ရနေပြီ ။ ဒါနဲ့ ရော ...ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို အသုံးပြုလို့ ရသလဲ ??
အဓိက မေးချင်တာတော့ International Payment တွေ ( အထူး သဖြင့် Google Adsense ရဲ့Payout ) တွေက ငွေကို ကျွန်တော်တို့မြန်မာ Local က Developer တွေ ဘယ်လို ထုတ်ယူနိုင်ပါသလဲ... ( TAX ဆောင်ရသည်ဖြစ်ဖြစ်...Commission ပေးရသည် ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ )
Wired Transfer အတွက် SWIFT code လိုပါတယ်။ CB Bank နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဘဏ်အချို့ support လုပ်ပါတယ်။
တဖက်ကလွှဲမယ့် ဘဏ်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကို support လုပ်ပေးဖို့ လိုပါသေးတယ်။
Google Adsense ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကို ပိတ်ထားသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို ငွေလွှဲလို့ ရမရ မသိဘူး။ သူတို့ policy က မြန်မာနိုင်ငံကို ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ SWIFT Code ကို အသုံးပြုပြီး ပြည်တွင်း bank ကို လွှဲနိုင်ပါတယ်။
Tax ကတော့ မိမိဘာသာ income tax ဆောင်ချင်ရင် ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို Google ရဲ့Payout တွေမှန်သမျှ (Adsense , AdMob) တွေကို ဒီကနေ ထုတ်ဖို့အခက်အခဲ နည်းနည်းရှိသေးပုံရတယ်ပေါ့ ??
ဒါကတော့ စမ်းကြည့်မှ သိမယ် ထင်တယ်။ နည်းနည်းတော့ risk များမယ်။
Saving Account ရှိရင် နိုင်ငံခြားငွေလွှဲလက်ခံလို့ရတယ်ဗျ ကျွန်တော်ဗီယက်နမ်ကငွေလွှဲကို AYA account နဲ့လက်ခံနေတာ ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်လက်ခံလဲဆိုတာ စာချုပ်စာတမ်းအထောက်အထားတော့လိုတယ် ကျွန်တော်က Bank ကို Employment contract mail နဲ့ပို့ပေးရတယ် ။ ငွေလွှဲရောက်လာရင် International Banking Dept ကစစ်ပြီး ပေါက်ဈေးနဲ့တွက်ပြီး Account ထဲမြန်မာငွေနဲ့ထည့်ပေးတယ် ။ လစာဆို AYA က 10$ ဖြတ်တယ် ။ ကိုယ့်ကိုလွှဲတဲ့ Bank က ကိုယ့်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက် Support မလုပ်ရင် တစ်ဆင့်ခံ Bank ကနေလာတယ် ။ ကျွန်တော့်ဆီကို ဗီယက်နမ်ကလွှဲရင် စင်ကာပူကိုဖြတ်ပြီးမှရောက်တယ် ။ ကြားထဲစုစုပေါင်းသုံးဆယ့်ငါးကနေ လေးဆယ်နီးပါးလျော့တယ်
payoneer ကနေ ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရနိုင်မယ်။ မြန်မာ လိပ်စာနဲ့ အကောင့်ဖွင့် ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ US ဘဏ် အကောင့် ထဲ ငွေလွှဲလက်ခံပြီး ဒီကနေ ကဒ်နဲ့ ပြန်ထုတ်လို့ ရတယ်။ ကဒ်ကို မြန်မာပြည် အရောက်ပို့ ပေးတယ်။
US bank account ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ... ကတ်ကရော ဘယ်အဆက်အသွယ်နဲ့ လုပ်ရတာလဲ ...
https://stripe.com/atlas ကို တချက်လောက် ကြည့်လိုက်ပါ။
skrill လက်ရှိသုံးနေပါတယ် wire transfer လည်းရသလို skrill to skrill ရပါတယ် မြန်မာပြည်က ကိုယ့်ဘဏ်အကောင့်နဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီး ပြန်ထုတ်လို့လည်းရပါတယ်။ 1-5 days ဆိုတာနဲ့ အကောင့်ထဲတန်းဝင်ပါတယ် မြန်မာဘဏ်တွေဘက်က မြန်မာငွေတစ်သောင်းဖြတ်ပါတယ်